अहो कस्तो निर्दयी समाज? सीतामढी बजारबाट अायो यस्तो मनै काम्ने दुःखद खबर – PathivaraOnline
Home > अपराध > अहो कस्तो निर्दयी समाज? सीतामढी बजारबाट अायो यस्तो मनै काम्ने दुःखद खबर
admin September 11, 2018 अपराध 0
काठमाडौं । एक युवक हजुरआमाको बरखीको लागि सामान किन्न घरबाट बजार निस्किन्छन् । मानिसहरुको भिडले उसलाई घेरा हालेर पिट्न थाल्छ । युवक चिच्चाइरहन्छ र तर मानिसहरु मानिसहरु लाठी, चिर्पट बर्साउन छाड्दैनन् । अन्ततः युवकको ज्यान जान्छ । मुटु नै काँप्ने यो घटना भारत सीतामढीको हो । सहियारा थाना क्षेत्रको सिगंहरीया गाउँ निवासी रुपेश कुमार झाको हत्या भएको हो ।
रुपेशका अंकल सुनिल कुमार झाका अनुसार भोलिपल्ट उनको आमाको बरखी छ । हजुरआमाको बरखीका लागि आवश्यक पर्ने सामानहरु किन्न रुपेश सीतामढी बजार जाँदाजाँदै बाटोमै मारिए । भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले निर्दोष व्यक्ति मारिएको र यसमा प्रहरी प्रशासनको लापरवाही भएको समाचारहरु लेखेका छन् । समाचारअनुसार प्रहरीले हत्यामा संलग्न भएको भन्दै १५० जनाविरुद्ध कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।